ZayYarHlaing: copy ကူးရင်စိတ်မညစ်ရလေအောင်
ကျွန်တော်တို့ copy ကူးကြတဲ့အခါ virus file ပါလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကူးမရ ရွှေ့မရတဲ့ file တွေ့နဲ့တွေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် "ဒုန်" ဆိုတဲ့အသံထွက်လာရင် အရမ်းစိတ်ညစ်ရတယ်ဗျာ။ file error တတ်လဲ ဆက်ကူးတဲ့ non stop copy software တွေရှိပေမယ့် စက်တိုင်းမှာ မရှိနိုင်ပြန်တော့ အဆင်မပြေပြန်ဘူးလေ။
ဒါကြောင့် window က ပါတဲ့ xcopy utility တစ်ခုကို သုံးကြည့်ကြရအောင်။ command prompt ကနေသုံးရပါ့မယ်။
ကျွန်တော့ CD Drive က F: ဆိုပါတော့။ ကျွန်တော်က CD ခွေထဲကနေ hard disk (D:) ထဲကိုကူးမယ်။ ဒီတော့
အရင်ဆုံး D: ထဲမှာ aquartz ဆိုတဲ့ folder လေးအရင်ဆောက်လိုက်တယ်
> Run box ကနေ cmd လို့ ရိုက်ပြီး Ms DOS cmmand pormpt ထဲကို ၀င်လိုက်ပြီ၊
>> F: ဆိုပြီး enter နှိပ်လိုက်တယ် ပြီးတော့
> xcopy /c /s *.* D:\_aquartz (ကြားထဲမှာ space တွေပါတယ်နော်) လို့ ရိုက် enter နှိပ်ပြီး ကော်ဖီသောက်ရင်း ကြည့်နေလိုက်တယ်လေ အေးဆေးပဲ
ဒီနေရာမှာ xcopy command လေး အကြောင်းနဲနဲ(သိသလောက်) ရှင်းပြပါရစေ
xcopy /s /c *.* D:\_aquartz ကျွန်တော်သုံးလိုက်တာက
xcopy က အဓိက commnad, /s *.* ကတော့ CD ထဲကရှိသမျှ file တွေနဲ့ subfolder တွေအားလုံးကူးမယ်
/c ကတော့ error တတ်လည်း ဆက်ကူးပါ ပေါ့
နောက်ဆုံး D:\_aquartz ဆိုတာကတော့ paste လုပ်မဲ့ destination ပေါ့ဗျာ
အသေးစိတ်သိချင်သူများအတွက် Xcopy ပုံစံကတော့ ဒီလိုပါ (as type XCOPY /? in command prompt)
0 comments: to “ copy ကူးရင်စိတ်မညစ်ရလေအောင် ”